ပြဿနာဖြေရှင်းချက်! - এক সপ্তাহ ভাবুন
ဘုရားသခင်သည် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ၊ ကိုယ်တော်၏ ပညတ်စည်းမျဉ်းများသည်လည်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။ မိမိကိုသာ အဓိကထား၍ အတ္တဆန် မစင်ကြယ်သော လူသားသည် ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်၌ ရပ်တည်နိုင်မလား။ ပြည့်ဝစုံလင်ခြင်းသည် မပြည့်ဝ မစုံလင်ခြင်းကို လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။ အဆိပ်တစ်စက်လေးက ခွက်တစ်ခုလုံးကို ညစ်ညမ်းစေသကဲ့သို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည့်ဝစုံလင်တော်မူသော ဘုရားသခင်သည် မပြည့်ဝ မစုံလင်သော သူမှန်သမျှ ပြစ်ဒဏ်ပေးတော်မူမယ်။ မနာခံခြင်း အပြစ်၏အခသည် သေခြင််းဖြစ်သောကြောင့် အမှားတစ်ခုပြုမိပါက သင်သည် စံညွှန်းမမီ၊ လွဲမှား၍ကျဆင်းသော သူဖြစ်ပါတယ်!
ဘုရားသခင်ကို လျစ်လျူရှုခြင်းသို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း၏ရလဒ်သည် ဘုရားသခင်ကင်းမဲ့သော ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းသည့် တမလွန်ဘဝ၌ ထာဝရသေခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။
လုံးဝသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောသူ ရှိနိုင်မလား။ ဖန်ဆင်းရှင်ထာဝရဘုရားသခင်၏ ပြည့်စုံခြင်း စံညွှန်းကို မီနိုင်သောသူ ရှိနိုင်မလား။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် သင်နှင့်ဘုရားသခင်အကြား ဖျန်ဖြေသူ ဖြစ်နိုင်မလား။ သင်နှင့်နောင်လာနောက်သား များအပါအဝင် လူတိုင်း၏ အပြစ်အမှားများအတွက် အစားထိုးလျော်ကြေးပေးနိုင်သော အစေခံကျွန်ရှိနိုင်မလား။
ဘယ်ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်နိုင်မလဲ။ မပြည့်စုံ မစင်ကြယ်သော သာမညလူသားသည် အရည်အချင်း မပြည့်မီပါဘူး။ ထို့ကြောင့် အရည်အချင်းပြည့်မီ၍ စုံလင်သောသူ၊ အံ့ဖွယ်တန်ခိုးနှင့် စွမ်းပကားရှိသောသူဖြစ်ရမယ်။
ထိုကဲ့သို့ အ့ံဖွယ်တန်ခိုးရှိသောသူကသာ တတ်စွမ်းနိုင်ပါမယ်။ စုံလင်သောသူဖြစ်ရမယ်။ သာမန်လူသားက အစားထိုး နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်သောသူက နှစ်ခါသုံးခါ အစားထိုးလုပ်ဆောင်ပေးချင် ပေးနိုင်မယ်။ သို့သော် ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် မိမိကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ဖြေရှင်းဖို့ရန် အလုပ်ရှုပ်နေမယ်။ ထိုအခြေ အနေသည် အန္တရာယ်ဖန်တီးသော သံသရာစက်ဝိုင်းဘဲ ဖြစ်ပေါ်စေမယ်။
သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး၌ ပြစ်မှားခဲ့သော အပြစ်များအတွက် အခကြေးငွေ ပေးဆောင်နိုင်သူ လုံးဝပြည့်စုံ၍ သင်နှင့် ဘုရားသခင်အကြား ဖျန်ဖြေသူ အစေခံကျွန်ရှိတယ် ဆိုကြစို့။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ပေးသောသူကို မမေ့သင့်ပါဘူး။ သင့်အတွက် မိမိအသက်ကိုပမာဏမပြုဘဲ စွန့်ှခြင်းသည် အမြင့်မြတ်ဆုံးသော အဖိုးအခပေးခြင်း မဟုတ်ဘူးလား။သင်၏ မစုံလင်ခြင်းနှင့် ပြစ်မှားခြင်းများ၏ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ရန် ဘုရားသခင်သည် တစ်ပါးပါးသော သူကို စေလွှတ်တော်မူမလား။ စစ်မှန်ပြည့်စုံသော အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိနိုင်ရန် မိမိအသက်ကို စွန့်သောသူ ရှိနိုင်မလား။ သင်ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ မယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ ယခုကြီးမားသော အဆင့်သို့ရောက်ရှိပါပြီ။ သင်သည် လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်သောကြောင့် လက်ခံယုံကြည်ဖို့ သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ဖို့က သင့်ဆန္ဒဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖျန်ဖြေသူအစေခံကျွန်စေလွှတ်ခြင်းသည် သင့်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ရန် ဘုရားသခင်စီစဉ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ သင်၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ရန် ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏ တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို ဤလောကသို့စေလွှတ်တော်မူခဲ့တယ်။ ယေရှုသည် ပြည့်ဝစုံလင်သော လူသားဖြစ်ပြီး အမှားအယွင်းနှင့် ချို့တဲ့ခြင်းများမှ လုံးဝကင်းစင်သောသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဤလောက၌ သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်မှာ ကျွနု်ပ်တို့ ကဲ့သို့ပင်စိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုး ရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အမြင့်မြတ်ဆုံးသော အဖိုးအခကို ပေးချေဖို့ရန် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်၌ အသေခံခြင်းအားဖြင့် ယေရှုသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖေါ်ပြတော်မူခဲ့ပါတယ်။ သင့်အတွက် အသွေးတော်ကို သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။ သင့်ကျူးလွန်မှုအားလုံး နောင်ကာလ၌ ပြုမိမည့် အပြစ်အပါအဝင် အပြစ်လွှတ်ခြင်းရစေခြင်းငှာ မိမိအသက်ကို စွန့်တော်မူခဲ့တယ်။
ယေရှုခရစ်တော်သည် သုံးရက်လုံးလုံး သေခြင်းတရားကို ခံတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် သေခြင်းတရားထက် တန်ခိုးကြီးတော်မူခြင်းကို ပြ၍ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။
ဤအရာသည် သင်နှင့် ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားသခင်အကြား ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်း ပြန်လည် တည်ဆောက်ဖို့ရန် ယေရှုကပေးဆပ်တော်မူခဲ့သော ကြီးမားသော အဖို့အခ မဟုတ်ဘူးလား။
အမြင့်မြတ်ဆုံးသော အဖိုးအခကို ဘုရားသခင်ကပေးဆပ််တော်မူခဲ့တယ်။ သင့်အတွက် တစ်ပါး တည်းသော သားတော်ကိုစွန့်တော်မူခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်တောင်းဆိုတော်မူသော အရာတစ်ခုကား သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို သင့်အပြစ်မှ ကယ်တင်ရှင်နှင့် သင့်အသက်တာ၏ သခင်အဖြစ်လက်ခံ ယုံကြည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဤအရာကို လက်ခံယုံကြည်ပါက သင်သည် ဖန်ဆင်းရှင်၏ စီမံချက် အကြံအစည်တော်၌ ပါဝင်နိုင်ပါမယ်။ သင့်အနာဂတ်သည်လည်း စိတ်ကူးမှန်းဆနိုင်သည် ထက်သာ၍ အံ့အားသင့်စရာ ဖြစ်ပါမယ်။
ဤအရာသည် သင့်အတွက် သတင်းထူးမဟုတ်လောက်ပါဘူးထင်တယ်။ ယေရှုခရစ်တော် အကြောင်းကို ပို၍ဖတ်ချင်ပါက အောက်ပါ အဆက်အသွယ် Link များကို အသုံးပြုပါ။
နေ့ (၆)အတွက် စဉ်းစားရမည့် မေးခွန်းများ။
•သင်သည် ဘုရားသခင်၏တိကျပြည့်စုံသော စံနှုန်းကို မမီနိုင်ကြောင်း သိရှိသလား။
•သင်သည် ဘုရားသခင်က ချစ်တော်မူကြောင်းကို သိရှိနားလည်သလား။
•သင်၏မနာခံခြင်းနှင့် ပြစ်မှားခြင်းများ၏ အဖိုးအခကို ပေးချေရန် ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏သားတော်ကို ဤလောကသို့စေလွှတ်တော်မူသည်ကို ယုံကြ
မနက်ဖြန် နေ့ (၇) သို့ပြန်လာဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
တစ်နေ့လျှင် 07 ကိုဆက်လက်
သင်သည် ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာပါက ဒေသန္တရအသင်းတော်နှင့် အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ မိမိဒေသ၌ အသင်းတော်မရှိပါက အခြားခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ကို ရှာပြီးအသင်းတော်စ၍တည်ထောင်ပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့် အသင်းတော်ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၌ရှိကြကုန်သောခရစ်ယာန်အပေါင်းစုကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒေသန္တရအဆင့်နှင့် ဆိုရင်ခရစ်ယာန်များစုဝေးပြီး ဘုရားသခင်အား ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကာ ချီးမွမ်းထောမနာပြုသော နေရာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုလည်း...
ဗတ္တိဇံ မင်္ဂလာဆိုသည်မှာ မိမိသည် သခင်ယေရှု၏ စစ်မှန်သော တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းကို အခြားသောလူများထံသို့ပြ သသော “ပြင်ပ လက္ခဏာ” ဖြစ်ပါတယ်။ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူခြင်းသည် ရိုးစင်းလေးပါ။ ရေထဲ၌ မတ်တပ်ရပ်၍ဖြစ်စေ၊ ထိုင်၍ဖြစ်စေ ဒူးထောက်၍ဖြစ်စေ အစပြုပါတယ်။ ထိုနောက်အခြားသောခရစ်ယာန်တစ်ယောက်က သင့်အားရေထဲသို့...
ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်း ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးသို့ (ဘုရားသခင်နှင့်) စကားပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ဆုတောင်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်က တိုက်ရိုက်အဖြေပေးတော်မမူသော်လည်း သင်၏ဆုတောင်းခြင်းကို ဂရုစိုက်စွာ နားညောင်းတော်မူသည်ကို တွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းသောအခါ စိတ်ရင်းမှန်ကန်ဖြောင့်မတ်စွာနေပါ။ (ဟေဗြဲသြဝါဒစာ ၁ဝး၂၂)။ သင်ဘာလုပ် တယ်ဆိုတာ ကိုယ်တော်သိတော်မူပါတယ်။ ဘုရားသခင်သည်...
ဘုရားသခင် ၌ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါး ပါဝင်တော်မူကြောင်းကျမ်းစာ ကအတိအလင်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဤအရာကို တြိနတိ (သုံးပါးတစ်ဆူဘုရား) ဟုခေါ်ပါတယ်။ ကျွနု်ပ်တို့လူသားများ အနေဖြင့် လူတစ်ယောက်သည် ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးနှင့် ဖွဲ့စည်းထားတယ် ဆိုတာနားလည်လို့ ခက်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ် ကျွနု်ပ်တို့ မသိဘူးသောကြောင့်...
အဘယ်ကြောင့် ယေရှုကို “ဘုရားသခင်၏သားတော်” ဟု ခေါ်ရသလဲ။ ယေရှု ကိုယ်တော်တိုင်က မိမိကိုယ်မိမိ ဘုရားသခင်၏သားတော် ဟုခေါ်တော်မူတယ်။ လူတွေက၊ “သင်သည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်မှန်ပါသလော” ဟုမေးကြသောအခါ ယေရှုက၊ “သင်တို့ဆိုသည့်အတိုင်း မှန်သည်” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ (ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း...
သမ္မာကျမ်းသည် သာမညစာအုပ်မဟုတ်ပါ။ စင်စစ် သမ္မာကျမ်းသည် စာအုပ်တစ်အုပ်မဟုတ်ဘဲ (၆၆)အုပ် ပါရှိသော စာကြည့်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းထဲ၌ သမိုင်းဝင်စာအုပ်များ၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိများ၊ ကဗျာလကာင်္ သီချင်းများ၊ အနာဂတ်ကြိုတင်ဟောချက်များ၊ သြဝါဒစာစောင်အစရှိသည်များ ပါဝင်ပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းသည် ရှေးဟောင်း ကျမ်းဂန်် တစ်အုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။...